Wafdi ka socda Midowga Afrika oo Muqdisho u yimid qiimeynta doorashooyinka (Daawo Sawirro) – STAR FM SOMALIA
Wafdi ka socda Ururka Midowga Afrika ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho, kuwaasoo qiimeyn ku sameynaya qaabka ay u socoto diyaar garowga doorashada lagu wado in sanadkan 2016 ay ka dhacdo Soomaaliya.
Xubnaha Wafdiga oo ka kooban afar xubnood ayaa la kulmay Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, AMISOM, Xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya iyo wakiilada qaar ka mid ah Beesha Caalamka.
War qoraal ah oo lagu qoray Website-ka AMISOM ayaa lagu sheegay in xubnaha Wafdigan ay qiimeyn ku sameynayaan habka ay u socoto diyaar garowga doorashada, meelaha ay Soomaaliya u baahan tahay in laga taageero iyo arrimo kale oo farsamada doorashada ah.
“Waxaan halkaan u nimid inaan qiimeyno sida uu u socdo howlgalka ciidanka AMISOM ,qaabka ay u socoto diyaar garowga doorashada sanadkaan 2016 ,waxyaabaha ay Soomaaliya u baahan tahay in laga taageero inta lagu gudajiro doorashada,in ay la xoojiyo howlgalka AMISOM” sidaas waxaa yiri gudoomiyaha guddiga Mr Olabisi Dare.
Wafdigan ayaa sidoo kale waxa ay la kulmeen madaxda ka tirsan howgalka Midwga Afrika ee Soomaaliya sida wakiilka gaar ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Caetano Madeira iyo sidoo kale ku xigeenkiisa General Nakibus Lakara.
” Muhiimada ugu weyn waxa ay tahay in la xaqiijiyo amniga guud ee Soomaaliya inta ay socoto doorashada iyo sidoo kale xurumaha ay ka dhacayso doorashada ,marka ogaada arintaas ayaa ugu weyn inaan qeyb qaadano oo aan qiimeyn ku sameyno ” markale waxaa sidaas yiri gudoomiyaha Wafdiga ka socda Midowga Afrika ee ee soo gaaray Muqdisho.
Wafdigan ayaa sidoo kale la kulmay Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dowladda Soomaaliya maxamed Cumar Carte.
Sanadkan gudahiisa ayaa lagu wadaa in Soomaaliya ay gasho isbedal cusub, waxaana dalka lagu wadaa in bilaha August iyo September ay ka dhacdo doorashada labada aqal ee Baarlamaanka, Guddoonkiisa iyo doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 12-07-2016